R2P (ခ) Responsipility to Protect ဘယ်အချိန် ၀င်ရောက် သလဲ | Danya Wadi
»ဆောင်းပါးများ»R2P (ခ) Responsipility to Protect ဘယ်အချိန် ၀င်ရောက် သလဲ
R2P (ခ) Responsipility to Protect ဘယ်အချိန် ၀င်ရောက် သလဲ
Posted by danyawadi on July 2, 2017 in ဆောင်းပါးများ
R2P ဆိုတဲ့အယူအဆကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေး World Summit မှာပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင် အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအယူအဆအရ အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေကိုကာကွယ် ပေးဖို့ အဓိကတာဝန်ရှိပြီး ကာကွယ်ပေးဖို့ပျက်ကွက် တယ်လို့ သတ်မှတ်ရင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ဝင်ရောက်ကူညီဖို့ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။
အချုပ်အချာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုအလေးထားပေမဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ လူသား ချင်း ​ဆိုင်ရာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း တွေရှိ နေရင်၊ Genocide ဆိုတဲ့အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု၊ Ethnic Cleansing လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု၊ War Crimes ဆိုတဲ့စစ်အတွင်း စောင့်ထိန်း ရမယ့်ကျင့်ဝတ်ကျော်ပြီးကျူးးလွန်တဲ့ပြစ်မှုမျိုး၊ Crimes Against Humanity ဆိုတဲ့လူသား မဆန်စွာ ရက် စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ပြစ်မှုဆိုတဲ့အခြေ အနေမျိုးရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ရင် နိုင်ငံတစ်ကာက သံတမန် နည်း လမ်း၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထား မှု ဆိုင်ရာ အကူအညီများနဲ့ အခြားငြိမ်းချမ်းတဲ့ နည်းလမ်း များ သာမက နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးကိုပါ သုံးနိုင်တဲ့အထိ စွက်ဖက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ဘဲဖြစ် ပါတယ်။
(၁ . ၇ . ၂၀၁၇) ​ကြေးမုံသတင်းစာ
← ဘာမြူဒါတြိဂံဒေသ အတ္တလန်တစ် သမုဒ္ဒရာတွင် ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်
မြန်မာလုံခြုံရေးအကြံပေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရာရှိတွေနဲ့ဆွေးနွေး →